Kulamo wada-tashi ee GMDQ uu la qaatay maamulka Gedo iyo Garbahaarey 23kii Diisembar – GMDQ
Kulamo wada-tashi ee GMDQ uu la qaatay maamulka Gedo iyo Garbahaarey 23kii Diisembar
Koox ka socota Guddiga Madaxbannaan Doorashooyinka Qaranka ( GMDQ) ayaa booqday magaalada Garbahaarey Sabtidii 23-kii Diseembar 2017. Garoonka diyaaradaha ayaa waxaa ka soo dhoweeyay wafdiga maamulayaasha degmada Garbahaarey iyo gobolka Gedo.
Galabnimadii 23-ka Diseembar, wafdiga QMDQ wuxuu kulan kooban la yeeshay wakiilada magaalada iyo gobolka. Kulanku wuxuu ku bilowday Qur’aan uu akhriyay mid ka mid ah ka qeyb-galayaasha. kadibna Mr. Ismail ayaa soo dhaweeyay ka qaybgalayaasha. Mr. Ismail sidoo kale wuxuu si kooban uga hadlayay ujeedada booqashada wafdiga.
Mudane SaydCali, oo ah kuxigeenka guddoomiyaha guddiga hor-kacayayna wafdiga ayaa la hadlay hogaamiyeyaasha siyaasadeed ee shirka joogay. Hadalkiisa ayuu taabtay waxyaabo badan. Waxyaabaha uu ka hadlay guddoomiye ku xigeenku aya waxaa ka mid ahaa; warbixin kooban oo ku saabsan gudiga iyo sida loo sameeyay. Guddoomiye kuxigeenka ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday ujeedada ugu weyn ee guddiga doorashooyinka loo sameeyay iyo sidoo kale guulihii ugu muhiimsanaa uu guddigu gaaray oo ay ka mid yihiin qorshaha istiraatijiyadeed ee shan sano ah.
Ka dib hadalkii guddoomiye ku xigeenka guddiga waxaa hadalka qaatay mudane Xuseen oo ah xubin ka mid ah guddiga. Mudane Xuseen waxa uu ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin waajibaadka guddiga, waxa uu sidoo kale ku baraarujiyay madaxdii shirka fadhisay in qabashado doorasho qof iyo cod ah aysan fududeyn balse uu guddigu ku dadaalayo xaqiijinta arrinkaas. Waxa uu intaa raaciyay mudan Xuseen in doorashada 2020ka ay ka duwanaan doonto doorashooyinkii dalku soo arkay ayna ka qeyb qaadan doonaan xizbiyo siyaasadeed. Ugu danbeyntii waxa uu komishanarku ka codsaday madaxda degmada iyo gobolkaba in ay la shaqeeyaan guddiga si loo xaqiijiyo hadafkii loo yimi.
Dhinacooda maamulka degmada Garbahaarey iyo gobolka Gedo waxa ay soo dhaweeeyeen muujiyeenna sida ay ugu faraxsanyihiin booqashada wafdiga ka socda guddiga doorashooyinka qaranka. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo iyo duqa degmada Garbahaarey ayaa ka hadlay shirka. Mudane Iimaan Caddow duqa degmada Garbahaarey waxa uu sheegay in uu ku faraxsanyahay booqashada guddiga, waxa uuna sheegay in maamulku uu si hagar la’aan ah ula shaqeyn doono wafdiga.
Ugu danbeytii waxaa laga wada hadlay jadwalka kulamada dhimman. Waxaana la isku af-gartay in Axadda 24ka Diisembar ay dhacaan laba kulan. Subaxa Axadda in wafdiga guddigu ay la fariistaan odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta magaalada. Halka galabkiina loo ballamay in guddigu uu la fariisto dhallinyarada iyo haweenka magaalada.
Waxaa la faafiyey December 24, 2017 August 16, 2018